2074-05-27 / Source: prasashan.com / 1K 0
अहिले तत्काल अधिकांश ठाउँमा पुगे पनि करिब–करिब एक तिहाइ ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीको अभावमा जनताले पाउनु पर्ने आधारभूत खालको सेवा सुविधा पनि नपाइरहेको कुरा जनप्रतिनिधिहरूबाट म कहाँ आइरहेको छ ।
गुनासो चर्को हुँदै गइरहेको छ । मन्त्रालय स्थानीय तहमा जसरी पनि कर्मचारी पठाउन केन्द्रित छ । यतिबेला सरुवाको कामलाई प्राथमिक सूचीमा नराखेर स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने काममा केन्द्रित भएका छौं ।
पठाउँदै छौं, लागि रहेका छौं, त्यसैमा केन्द्रित छौं भनेको नै महिनौं भइसक्यो, व्यवहारिकरुपमै पुग्छन् कहिले ? असोज पहिलो हप्तामा स्थानीय तहमा न्यूनतम कर्मचारी पुग्छन् । केही समयमै कर्मचारी पठाउने एउटा खालको सिनारियो देखाउँछौं । राजनीतिक रूपमा संघीयता कार्यन्वयन दुई छलाङ अगाडि मारिसक्यो, तर प्रशासनिक रूपमा सिंहदरवार गाउँ पुग्न नसक्नुले के कर्मचारीले नै जान नमानेका हुन् या तपाइले पठाउन नसकेको हो ?
स्थानीय तहमा कर्मचारी जान मानेनन् भनिरहँदा कर्मचारी पठाउनेतर्फ राजनीतिक रूपमा पनि ठोस निर्णय आउन सकेको देखिँदैन,निजामती सेवा ऐन महिनौंदेखि समितिमा थन्किनुले दलले यसलाई गम्भिर रुपमा नलिएको बुझिन्छ नि ? त्यो कुराको निश्कर्षमा अहिले नै त पुग्न सकिँदैन । तर, केही ढिलाई भएको अवश्य हो । कर्मचारी समायोजन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएर छलफल पनि सकिएको छ । संसोधन आएको छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । संसोधनमाथि छलफल भएर पारित हुन बाँकी छ । त्यो काम पनि अगाडि बढिरहेको कुराले के कुरा संकेत गर्छ भन्दा अहिलेको प्रशासनिक पुनः संरचनाका लागि यो जुन खालको ढिलाइ भएको छ त्यो महसुस गरेर कामलाई अगाडि बढाउने काम युद्धस्तरमा भइरहेको छ । सरकारले पनि त्यो खालको कर्मचारी पठाउन अहिले तत्काल कर्मचारी समायोजनसँगै कर्मचारी पठाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
अहिले तत्कालिक व्यवस्था गरेर भए पनि हामीले न्युनतम् कर्मचारी गाउँ/नगरमा पठाउनैपर्ने हुन्छ । त्यही खालको होमवर्कमा हामी अगाडि बढेका छौं । तात्कालिक व्यवस्था गर्ने र अब नीतिगत रूपमा ऐन कानुनको व्यवस्था गरी पठाउने काम अगाडि बढाएका छौं । यदि समयमै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिएन, जनतालाई परिवर्तनको आभाष दिलाउन सकिएन र संस्थागत गर्न नसकेर फंसनमा नजाँदै संघीयता नै फेल खाने अवस्था आयोभने त्यसको मुख्य दोष ब्यूरोक्रेसीले लिन्छ कि राजनीति ?
त्यो कुरा पनि यदाकदा नभएको होइन । राजनीतिबाट सबै कुरा बिग्रिन्छ र सप्रिन्छ पनि । यस कुरालाई दुई पाटोबाट हेर्ने हो भने यहाँसम्म आइपुग्दा परिवर्तनले जितेको छ । त्यो परिवर्तनलाई एक खालको दिशा दिन र बिग्रेको काम र कमजोरी सच्याउन राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका हो । उस्तै पर्यो भने तिनीसँग आश्रय तथा आड लिएर भइरहेका गलत काम पनि खारेज गर्न सकिन्छ । यसरी राष्ट्रको साधक बनाउने किसिमले तिनलाई त्यो खालको मान्यता दिए राजनीतिक दलहरूले ।
कतिपय सन्दर्भमा राज्यले स्पष्ट खाका नबनाइ एक किसिमको हौवाको भरमा अघि बढ्न खोज्दा पनि यस्तो समस्या आउने गरेको देखिन्छ, किन चुक्छ राज्य ? नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि त्यस अन्तर्गत राज्यका मेसिनरीले पालना गर्नुपर्ने ऐन कानुनको केही आवश्यकता पर्छ । त्यो कमी भएको अवश्य हो । कर्मचारीका सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा तह ऐन आवश्यकता पर्छ । त्यो ऐन नहुँदा कतिपय कर्मचारीमा भविश्यको अन्योल देखिएको छ । भविश्य नदेखेपछि त्यहाँबाट उम्किन खोज्नु स्वभाविक भइहाल्यो । त्यसका पछाडि केही ग्यापले काम गरेको छ भन्ने लाग्छ । त्यो कुरा हामीले अहिले चाहेर पनि बाहिर लैजान सक्दैनौं । त्यो वर्कआउट भइरहेको छ । त्यो वर्कआउट भइरहेको छ भनेर पनि पत्याउने कुरा भएन । त्यो ल्याइसकेपछि स्थानीय तहमा जान नचाहने खालको ट्रेन अन्त्य हुने मलाई विश्वास छ । एक जवानामा स्थानीय तहमा जान होडबाजी नै थियो । प्रतिस्पर्धा थियो । अब पनि त्यही खालको प्रतिस्पर्धा नयाँ स्तरबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।